Abenzi be-LAN Cable & Suppliers | China LAN Ikhebula Factory
Ikhebula le-UTP CAT6A LAN
Lezi zintambo ze-UTP LSZH zenzelwe ukuletha ukusebenza okunamazinga okuqinile okuqinisekisa ukusebenza komkhawulokudonsa okwedlulele kwezinhlelo zokusebenza zanamuhla zejubane elikhulu. Ikhebula lenzelwe ukuxhasa izinhlelo zokusebenza zenethiwekhi eziqondile emabangeni afinyelela kumamitha ayi-100. Ikhodi yombala ye-Pair Pair 1: White / Blue, ne-Blue Pair 2: White / Orange, ne-Orange Pair 3: White / Green, no-Green Pair 4: White / Brown, noBrown Application ● Isekela isigaba 6A amanethiwekhi asebenza kuze kufike ku-500 MHz izicelo ● Ovundlile nomgogodla ...
Ikhebula le-CAT6 LAN
Izici 1. Isebenzisa okokusebenza kwekhwalithi ephezulu engenayo i-oxygen engenakho ukumelana namandla aphansi namandla wokuhambisa amasignali aqinile. 2. Isikhumba esisha esijiyile, ukumelana nokuqina nokusonga, ukuvimbela ukuguga. 3. Umgogodla wangaphakathi wokuminyana okuphezulu ukumelana nokugqwala futhi une-ductility enhle. Incazelo Uhlobo lwentambo ye-CAT6 Shielding type UTP Izinto zekhebula sheath PVC / LSZH lokushisa okusebenzayo -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉) Izinga lombala wekhebula ngokwezifiso 1Gbps Cable length 305M / vol ...
Ikhebula le-UTP CAT5E LAN
Le UTP Lan Cable CAT5E Ethernet ifakwe inqubo esezingeni eliphakeme, enempilo yensizakalo ende yokusetshenziswa. Ngokuya nge-standard ye-Ethernet esungulwe yi-IEEE, indawo ejwayelekile yendawo esebenzisa i-topology yenkanyezi ilungele ipheya elisontekile. Ngaphezu kwalokho, uyaqaphela umsebenzi ukuvimbela ngempumelelo ithonya lokuphazanyiswa kwamandla kagesi, ukuze uhlelo lwezintambo luhlale luhambisana nokusebenza okuhle kakhulu kwe-electromagnetic nokusebenza kokudlulisa. Woza nezinto eziphezulu zekhwalithi, th ...